Brezila : Nirehitra ny alan’i Amazonie, tsy mety maty ny afo
Efa maherin’ny 3 herinandro izay no nirehitra ny ampahany amin’ny alan’i Amazonie ary mbola tsy mety maty ny afo hatramin’izao.
Niredareda be ny afo tany amin’ny valan-javaboahary akaikin’ny Rondonia fa niitatra hatrany amin’ny faritr’i Mato Grosso izany ary nanomboka omaly alakamisy 22 aogositra dia tsy mitsahatra ireo afo kely be dia be miitatra moramora. Misy foana moa ny doro-tanety toa izao isan-taona any amin’ny faritra Amazonie iny saingy volana vitsy izay dia tena nihamafy izany. Nitombo 83% ny doron-tanety hatramin’ny fiandohan’ny taona. Nilaza ny fanjakana breziliana fa ny hain-tany no tena mampirongatra ny doro-tanety toa izao. Matetika tonga dia mirehitra avy hatrany ireo bozaka na tsy misy manipy afo aza. Tamin’ity kosa, nilaza ny fikambanana tsy miankina iray fa ny politika manohitra ny fikoloana ny tontolo iainana ataon’ny breziliana no tena mampirongatra ireo doro-tanety ireo.